Olee otú ịdọta ndị ahịa gaa Meat Industry?
Post oge: Sep-20-2020
Site na mmụba nke usoro ibi ndụ ndị mmadụ, nri anụ aghọọla akụkụ dị mkpa nke nri ndị mmadụ. Na mgbakwunye na inye ahụ mmadụ oke okpomọkụ, ọ na-enyekwa nri dị mkpa maka uto na mmepe mmadụ yana ịchekwa ahụike. 1. Functi ...GỤKWUO »
Nri ọ bụla na-enweghị sayensị nwere ike ịnwe nje bacteria, nje, nje, nsi na mmetọ kemịkal na anụ ahụ. E jiri ya tụnyere mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, anụ anaghị ata ahụhụ nwere ike ibute nje na nje, karịchaa bu ọrịa zoonotic na parasitic. Ya mere, na mgbakwunye na ịhọrọ ...GỤKWUO »
Nchedo na Ihe Ọmụma Ahụ Ike Na Industrylọ Ọrụ Na-emepụta Nri Kwesịrị Knowmara
N'ime ụlọ ọrụ nri, gụnyere ụlọ ọrụ nri anụ, ụlọ ọrụ mmiri ara ehi, ụlọ ọrụ mkpụrụ osisi na ihe ọ beụverageụ, mkpụrụ osisi na nhazi akwụkwọ nri, nhazi mkpọ, achịcha bekee, ebe omume biya na usoro mmepụta nri ndị ọzọ metụtara, nhicha na nhicha nke ngwa nhazi na ọkpọkọ, igbe, usoro mgbakọ , nwepu ...GỤKWUO »